भैंसी व्याएपछि १० हजार पुरस्कार, सुत्केरी भैंसीले भत्ता पाउने : RajdhaniDaily.com
HomeBreaking Newsभैंसी व्याएपछि १० हजार पुरस्कार, सुत्केरी भैंसीले भत्ता पाउने
काभ्रेपलाञ्चोक । किसानलाई पशुपालनमा आकर्षति गराउन जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा भैंसी वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले पशुपालनबाट किसानको आयस्तर वृद्धि गर्न अनुदानमा उन्नत जातको भैसी वितरण कार्य सुरु गरेको हो । नमोबुद्ध नगरपालिकाका नगरप्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाले चुनावी प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा कृषि र पशुपालनमा नगरका किसानलाई व्यवसायिक बनाउन र किसानको आयस्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको बताएका छन् ।
नगरपालिकाले शुक्रबार वडा नं. १० बाट किसानलाई भैसी वितरण कार्यको सुरुवात गरेको हो । शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा वडा नं. १० का ५५ जना पशुपालक किसानलाई थोरै भैसी वितरण गरिएको छ । किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदानमा भैसी वितरण गरिएको हो ।
नगर प्रमुख तिमल्सिनाका अनुसार दुधमा आत्मनिर्भर बनिसकेको नगरपालिकामा पशुपालनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन अनुदानमा भैसी वितरणको कार्य सुरु गरिएको हो । उनका अनुसार यही आर्थिक बर्षमा अनुदानमै नगरका किसानका लागि उन्नत जातका बाख्रा वितरणको कार्यसमेत हुँदैछ । यसका लागि बाख्रा खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको तिमल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडाै‌ं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै स्थायनीय तहमा अस्पताल सेवा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेका छन् । अस्पताल नभएका ६४९ तहमा ५ शैयाको...
पूर्वसचिव उपाध्यायलाई तीन दिन थुनामा राख्न आदेश
शवबाहन चालक नआएपछि वडाअध्यक्ष संक्रमितको शव लिएर घाट पुगे
सुरज श्रेष्ठ - August 1, 2021